Mhando dzemibhedha yezvipatara | JBH Chiremba
Mubhedha wechipatara unowanzoreva mubhedha wevacheche, uyo unogadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemurwere uye tsika dzakazara mubhedha, uye yakagadzirirwa nenhengo dzemhuri kuti dziperekedze. Iyo ine akawanda mabasa eukoti uye ekushanda mabhatani. Inoshandisa mubhedha wakachengetedzwa uye wakachengeteka, sekutarisa uremu, kudya kumusana, uye kungwara Kutendeuka pamusoro, kudzivirira mibhedha, kushushikana kwakashata kubatana, mubhedha-kunyorovera alarm yekutarisa, kutakura kwenhare, zororo, kudzoreredza (pasiti kufamba, kumira), mushonga infusion uye mamwe mabasa. Mubhedha wekuvandudza unogona kushandiswa uri wega kana pamwe chete nemubato wekurapa kana wekugadzirisa. Mari yekudzoka yekuyamwisa kazhinji haina kupfuura 90cm yakafara uye imwechete-nhovo imwechete mibhedha. Izvo zvinokodzera kuongororwa kwechiremba, kuongororwa uye kushanda kwenhengo dzemhuri. Inogona zvakare kushandiswa kune vanhu vane hutano, vakaremara zvakanyanya, vakwegura, weti kusagadzikana, varwere vehuropi mukukuvara kana kupora kurapwa kumba, kunyanya kuita. Midziyo yemubhedha wemagetsi inosanganisira musoro wemubhedha, iyo yakawanda-inoshanda mubhedha furu, rutsoka rwemubhedha, gumbo, mubhedha wemubhedha, mudhiraivho, tsvimbo yemagetsi yekusunda, iwo maviri kuruboshwe uye kurudyi ekupeta varindi, uye ivo 4 vakaputira akanyarara casters. Yakabatanidzwa tafura yekudyira, 1 anti-decubitus mweya wepombi tireyi, iri pasi pemubhedha shefu, 2 isina kusimba kumanikidza-yakabatana-yekuradzika-yekuyeredza maalarm, 1 seti yehuremu hwekuongorora sensera, tafura inotsvedza tafura nezvimwe zvinhu. Kune mibhedha yakajairwa, mibhedha yekudzoreredza, uye nehungwaru-yekutenderera-pamusoro pemibhedha. Mibhedha yemuchipatara inogona zvakare kunzi mibhedha yezvipatara, mibhedha yekurapa, mibhedha yekuchengetedza vanachiremba, nezvimwewo mibhedha inoshandiswa nevarwere panguva yekurapwa, kugadzirisa, uye kupora. Ivo anonyanya kushandiswa muzvipatara zvikuru, nzvimbo dzekumaruwa dzehutano, nzvimbo dzehutano nharaunda, nzvimbo dzekuvandudza, uye kuchengetwa kwemusha. Ward nezvimwe.
Sekureva kwechinhu ichi, inogona kuve yakakamurwa kuita mibhedha yeABS, mibhedha yese isina simbi, mibhedha yesimbi isina simbi, mibhedha yese yesimbi, nezvimwe.
Zvinoenderana nechinangwa, inogona kuve yakakamurwa mumibhedha yekurapa nemubhedha wemba.
Zvinoenderana nebasa iri, rinogona kuganhurirwa mumibhedha yemagetsi muchipatara nemubhedha wemuchipatara. Mabhedha emagetsi epachipatara anogona kupatsanurwa mumibhedha mishanu-inoshanda yemagetsi chipatara uye matatu-anoshanda emagetsi emubhedha chipatara. Bhuku remubhedha remuchipatara rinogona kukamurwa kuita maviri-rocker hospital mabhedha, single-rocker hospital mibhedha, uye flatbed chipatara mibhedha.
Multifunctional yemagetsi mubhedha muchipatara
Iyo mubhedha inoumbwa nekutengesa zvinhu zvealuminium, iyo yemubhedha pamusoro peiyo mambure chimiro, uye pamusoro pemubhedha unofema. Iyo yese yepamusoro pemubhedha inorapwa ne electrostatic spraying.
Iyo yekudzivirira inogadzirwa neaerospace aluminium profiles uye inogona kupetwa.
Mavhiri mana anotora 125mm yekurapa yakasarudzika yakanyarara uye yekuzvivharira ma casters, ayo akatsiga uye akavimbika.
Tafura yekudyira ndeye 30cm yakafara retable yekudyira tafura yepurasitiki, iyo yakasimba uye yakasimba.
Yakapeta kona yekumashure: 0-75 °, kupeta kona yegumbo: 0-90 °
Zviyero: 2000 × 900 × 500mm (kureba × upamhi × kukwirira kwemubhedha pamusoro)
Kukura kwechimbuzi: 225 × 190mm
Multifunctional bhuku rechipatara mubhedha
Kutora mibhedha yeABS semuenzaniso, mibhedha yemanyowani yekuita basa yakakamurwa kuita mbiri-mabhedhi mabhedhi, mibhedha imwechete-yematombo, uye mibhedha yakati sandara.
Basa rezvigadzirwa remubhedha wechipatara chemanheru rakafanana neiro remubhedha wemagetsi muchipatara, asi murwere haakwanise kurishandisa iye pachake uye anoda rubatsiro rwemunhu anotevera. Nekuti mutengo wakaderera pane iwo wemagetsi emibhedha yemuchipatara, inonyanya kukodzera kuvarwere vari pamubhedha kwenguva pfupi. Panguva imwecheteyo, inoderedza mutoro uye kumanikidza kwevashandi vanotevera.
Stainless simbi yemubhedha pamubhedha wedombo muchipatara
Musoro wemubhedha wesimbi isina simbi, simbi yakasaswa furemu yemubhedha nemubhedha wepamusoro zvine musoro muchimiro uye zvinogara. Inogona kuona iwo maviri mashandiro emusana uye kukotama kwegumbo. Inokodzera varwere vakura vasingakwanise kumuka pamubhedha kana zvinonetsa kuti vabude pamubhedha. Inovapa neakakosha masevhisi anodiwa kuti vapore, kurapwa, kufamba uye hupenyu hwezuva nezuva, inovandudza nhanho yekutarisira, uye inovandudza hupenyu hwevarwere, kunyanya akakodzera Mhuri, nharaunda yekurapa ekurapa masangano, dzimba dzekuchengetedza, zvipatara zvejeriatric
recliner mubhedha wevarwere, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, kurapa kuraswa, simba mubhedha wechipatara, kumeso muromo mask, zvakazara muchipatara mubhedha,
recliner mubhedha wevarwere, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, zvakazara muchipatara mubhedha, kumeso muromo mask, simba mubhedha wechipatara, kurapa kuraswa,